I-100 yezona ziNinzi eziqhelekileyo ezingaqhelekanga ngeenombolo zesiNgesi
Uninzi lwezibizo zesiNgesi zenza ubuninzi ngokongeza i --s (incwadi, i-band, i-bell s ) okanye -e (ibhokisi, i-bunch es , i-batch es ). Ezi zakhiwo ezininzi zilandelwa ukuba zilandele umzekelo oqhelekileyo .
Akukho mithetho elula, ngelishwa, ngeeninzi ezingekho phantsi kwesiNgesi. Bamele bafunde kwaye bakhunjulwe.
(S. Curtis noMn. Manser, Umqulu Wombhali wePenguin, 2002)
Kodwa akuzona zonke izibizo ezihambelanayo nalo mzekelo osemgangathweni. Enyanisweni, ezinye zezibizo eziqhelekileyo zesiNgesi zineendlela ezingaqhelekanga-njengowesifazane / umfazi kunye nomntwana / umntwana.
(Izizathu zezi zinto zixutyushwa ngokufutshane kwiinqununu zeeNdawo eziNinzi zeeNgesi .) Ukongezelela, izibizo ezininzi zinezinye iindawo ezininzi, esinye sisoloko sisinye.
Ngokumalunga nale fom ehlukile, akukho mithetho eqinileyo yokukhokela ukusebenzisa kwethu:
Abantu kufuneka bafunde yiphi ifomu yokuyisebenzisa njengoko badibana namagama okokuqala, kwaye kufuneka baqaphele ukuhlukahluka kokusetyenziswa . Xa kukho ukhetho, i-classic [engavumelekanga] ininzi isoloko isetyenziswe ngobuchwepheshe, ifunde, okanye isesikweni, njengokuba kunjalo kwiifomula kunye namafomula okanye ikharityhulam kunye nekharityhulam . Ngamanye amaxesha, ezinye iindawo ezininzi ziye zavelisa izinto ezahlukeneyo, njengamaxesha emimoya (i-spirit) yama- mediums vs. (mass) media , okanye i- appendix (kwimibutho okanye kwiincwadi) ngokuchasene (kuphela kwiincwadi).
(UDavid Crystal, iCambridge Encyclopedia yoLwimi lweNgesi , u-2 we-Cambridge University Press, 2003)
Njengoko uza kubona kwoluhlu olulandelayo, amaninzi amaninzi kunye neeninzi ezingekho phantsi kweemali ziyimali-mboleko eziye zagcina iifom zazo zangaphandle (okanye ubuncinci zigcinwe kulezo zifomu njengezinye iindlela eziqhelekileyo zesiNgesi ezininzi).
Kuluhlu olungezantsi, uya kufumana iifom zobunqamle kwikholam ekhohlo kunye neefom ezininzi ezihambelana nekholamu efanelekileyo. Xa isibizo sinamaqela angaphezu kwesinye, isiqhelo esingaqhelekanga sibonakala kuqala, nangona oko akuthethi ukuba ifomu engavumelekanga iyamkelwa ngokubanzi kunokuba ifom rhoqo.
isongezelelo iongeze addendums
i-antenna ii-antenna okanye ii-antennas
nxu lumano zi phikisa
ipepe iipensi okanye iifom
si hlomelo izihlomelo okanye izihlomelo
mhle beaux okanye ibhonasi
kwiziko ii-bureaux okanye ii-bureaus
cactus i cacti okanye i- cactus okanye i- cactus
château châteaux okanye i- chateaus
ikhontoti iikonsti okanye ii- concertos
umqathango iikhrayitheriya okanye iimpawu
ikharityhulam iikharityhulam okanye ikharityhulam
i datum idatha
bafe dice okanye afe
ncinane azinqamle okanye abancinci
fez fezzes okanye fezes
intlanzi iintlanzi okanye iintlanzi
jolise foci okanye ugxininise
unyawo iinyawo okanye unyawo
ifom amafomula okanye amafomula
fungus i fungi okanye iifungus
uhlobo genera okanye i- genus
iqela iqela okanye abazala
inselo iifolokhwe okanye amaqhekeza
lathisi indices okanye iindleko
larva izibungu okanye izibilini
freetto freetti okanye i- freettos
matriki matrices okanye matrixes
phakathi amajelo okanye amajelo
imemorandam imemoranda okanye imemorandam
nebula nebulae okanye nebulas
nucleus iisuclei okanye iisucleus
inzala inzala okanye inkunkuma
i-opus i-opera okanye i- opuses
inkomo inkomo okanye inkomo
into iziganeko okanye iziganeko
i radius iirhasi okanye iirhasi
sompempe referenda okanye ii- referendums
islamoni salmon okanye i- salmon
yesikhafu iinqwelo okanye iifowuni
i-shrimp i-shrimp okanye i- shrimps
isilabhasi syllab okanye i syllabuses
ngqungquthela symposia okanye ii symposiums
ngqamana i synopses
i tafile tableaux okanye tableaus
umqala iitriti okanye iingcambu
ityhuna ityhuna okanye iitas
vertebra vertebrae okanye vertebra
vertex izithako okanye ii- vertex
vortex vortices okanye vortexes
wharf amaharha okanye amaharha
> Ubuninzi befom eluhlu lubonwa nguMerriam-Webster's Collegiate Dictionary (2003) kunye ne -American Heritage Dictionary yoLwimi lweNgesi (2011).
Ukukhulisa iSigama sakho sesiNgesi nesigama sama-50 esiGrike kunye nesiLatin
Dictionary kaSamuel Johnson
Uluhlu lwee-26 zeziSithandathu eziqhelekileyo ngesiNgesi
Kamva kunye neLatter
Iprofayili yaseAntonio Vivaldi
I-Gray's Anatomy Isiqendu 3 Isiqendu
Iintlobo zeeNgoma zokwakha